Istudyo Esilungiswe Ngokuphelele - e-Luxembourg City - I-Airbnb
Istudyo Esilungiswe Ngokuphelele - e-Luxembourg City
Luxembourg, District de Luxembourg, i-Luxembourg
Sinikeze i-Studio 🏠 enefenisha ephelele, enethezekile etholakala enhliziyweni ye-Luxembourg elungele ibhizinisi noma uhambo lokungcebeleka. I-Studio ifinyeleleka nganoma yiziphi izinsiza zezithuthi zomphakathi 🚌🚆 🚖 ezitholakala endaweni nasezindaweni ezizungezile.
🚍 Izitobhi zamabhasi ezitholakala phakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo eliyimizuzu emi-2 ukuya kwemi-5. Futhi, uzothola Izindawo zokudlela, Izitolo Zokudla endaweni ehamba ngezinyawo eyi-2 - 5 min.
Sizokunikeza ulwazi oludingekayo ukuze siqinisekise ukuthi unolwazi lwezinkanyezi ezingu-5 ngaphakathi nangaphandle kweSitudiyo 🏠. Izincomo zethu ezithunyelwe kuwe zizofaka izinketho ezinhle kakhulu zokubona indawo, izindawo zokudlela, amabha, isiko, ama-nightclub, njll. yase-Luxembourg City kanye nezwe ngokwalo.
Sinababungazi abanolwazi futhi sifuna ukuthi ujabulele i-Luxembourg ngangokunokwenzeka.
I-Studio 🏠 iyakhanya, inesitayela nekhishi elijwayelekile. Inombhede owodwa, i-smart TV enegumbi lokugezela elisezingeni eliphezulu, nendawo yokudlela encane ethokomele.
Ziziphelele futhi sinefenisha ephelele, iSitudiyo 🏠 siza sifake amashidi ombhede anethezekile, amathawula kanokusho, imikhiqizo yeshawa ephambili, ukufinyelela kwe-Wi-Fi, isiqandisi, izitsha, izinto zasekhishini, nokuningi.
ubusuku obungu-7 e- Luxembourg
Jabulela ukudla kwamazwe ngamazwe, ukubuka indawo, ukuyothenga 🛍, nemisebenzi yangaphandle ngesikhathi uhlala, konke okufinyelelwa yizindawo zokuthutha zomphakathi nezizimele 🚌🚆 🚖 ezitholakala endaweni yakini naseduze.
I-Place des Martyrs, i-Luxembourg, i-Galerie d'Art Contemporain Am Tunnel, i-Place de la Constitution, i-Musée de la Banque, i-Plateau Bourbon, i-Adolphe Bridge, iSikhumbuzo Sesikhumbuzo konke kusebangeni lokuhamba eliyi-5-20 min.
Lesi situdiyo siphethwe 24/7 yiqembu lochwepheshe. Noma yini sicela ukhululeke ukuxhumana nanoma yiliphi ilungu leqembu lethu futhi sizokujabulela ukukusiza.
Hlola ezinye izinketho ezise- Luxembourg namaphethelo